Adeegga Macaamiisha | Shandong Dingtaisheng Makiinado Technology Co., Ltd.
Qorsheynta goobta iyo dejinta barnaamijka
Marka loo eego baahida macaamiisha, waxaad siisaa xalal farsamo oo bartilmaameed ah, hufan, qalabka jeermiska dhalmada oo kaabaya tas-hiilaadyo qorshaysan oo faahfaahsan
DTS waxay leedahay koox iibka kadib, waxaan ku siin karnaa adeegyo dayactir joogto ah macaamiisha. Marka qalabkaagu dhibaatooyin leeyahay, injineerada DTS-iibka kadib ayaa kuu baari kara oo kugu hagi kara inaad dhibaatooyinka ka fog xalliyaan. Markuu macaamilku kaligiis baddali karin qalabka dayactirka, DTS waxay ballanqaadaysaa inay timaaddo saldhigga 24 saac gudahood gobolkeenna iyo 48 saac gudahood meel ka baxsan gobolka.
DTS waxay leedahay shaybaar baaritaan. Xarumahan ayaa si buuxda u qalabaysan si ay u soo saaraan xaaladaha saxda ah ee wax soo saarka warshadaha.
Waxaad ka heli doontaa caawimaad khubaradayada ku takhasusay nadaafadda jirka iyo teknoolojiyadda cuntada, waxaadna awoodi doontaa inaad:
- Tijaabinta iyo isbarbar dhigga socodka socodka iyo codsiyada (habdhiska, wareega, nidaamka ruxista)
- Isku day nidaamkayaga xakamaynta
- Deji nidaamka nadiifinta (dib u celinta tijaabada) oo ku qalabeysan aaladda xisaabinta F0)
- Tijaabi baakadahaaga socodka nidaamkayaga
- Qiimee tayada cuntada ee badeecooyinka dhammaaday
Iyada oo gacan laga helayo wada-hawlgalayaasha, unugyada imtixaanka ayaa sidoo kale loo adeegsadaa horumarinta qalabka warshadaha, sida buuxinta, shaabadaynta iyo shirkadaha baakadaha.
Tijaabada badeecada, horumarinta qaaciddada farsamada
Ma u baahan tahay inaad sameysid qaabka cuntada lagu karsado ee kuleylka ah?
- Miyaad noqotay milkiilaha hanka leh ee DTS Retorts?
- Ma dooneysaa inaad isbarbar dhig ku sameysid daaweyn kala duwan oo aad u hagaajiso cuntadaada jeermiska dhalista?
- Ma horumarinaysaa taxane cusub oo alaab ah?
- Ma rabtaa inaad beddesho baakadaha cusub?
- Ma rabtaa inaad cabirto qiimaha F? Mise sabab kale?
Dhamaan shaqaalahaaga waxay ka faa'iideysan karaan tababarka la-qabsiga ee meelo kala duwan
Adeegsiga hawlgalka soo celinta, oo ku habboon bilowgayaasha, khibrad leh ama shaqaale heer cayiman ah
Adeegyadeenna waxaa lagu qaban karaa dhismahaaga ama imtixaankeena 'LABS', oo loogu talagalay in lagu soo dhoweeyo ardayda isla markaana u suurtageliya inay isku daraan aqoonta aragtida ah iyo khibradda wax ku oolka ah Khabiiradayada ku takhasusay daaweynta kuleylka ayaa kaa caawin doona kuna hagi doona inta aad tababarka ku jirto.Waxaan sidoo kale kaa caawin doonaa inaad wareejiso Natiijooyinka tijaabada ah ee ku saabsan goobta wax soo saarkaaga wax soo saar.Ma jirto marxalad horumarineed oo kaa joojinaysa qalabkaaga waxsoosaarka, taasoo kuu oggolaanaysa inaad waqtiga ilaalsato, kordhiso dabacsanaanta, iyo inaad sii wadato wax soo saarka inta lagu tababarayo.
Haddii kale, waxaan ku sameyn karnaa dhammaan tijaabooyinka nafteena shaybaarka waxaanan raaci karnaa taladaada.Waxaad kaliya u baahan tahay inaad noo soo dirto muunad alaabtaada ah waxaanan ku siin doonaa warbixin buuxda dhamaadka baaritaanka. Dhammaan macluumaadka la isweydaarsaday waxaa si dabiici ah loola dhaqmaa sidii si qarsoodi ah
Waxaan ku siinaa tababar warshadda (dayactirka joogtada ah, dayactirka farsamada,
nidaamka xakamaynta iyo badbaadada ...), oo ah siyaasad tababar oo loogu talagalay inay ku haboonaato baahiyahaaga shaqsiyeed.
Shaybaarkayaga, waxaan ku siin karnaa kal-fadhiyo tababaro hawl wadeenadaada soo noqoshada.
Waxay isla markiiba dhaqan gelin karaan aragtida inta lagu jiro kalfadhiga.
Tababbarka goobta macaamiisha
Waan ognahay warshadda wax soo saarta, waxaanan ognahay in markii qalabku hoos u dhaco, ay kugu kacayso lacag aad u tiro badan. Natiijo ahaan, DTS waxay ku dabaqday naqshad adag iyo qaybo dhamaan mashiinadeena. Xitaa shaybaarkayaga iyo mashiinnadayada cilmi-baarista waxaa lagu soo saaray qaybaha fasalka warshadaha. Xirmadayada xakamaynta sare, qalabka cilad bixinta badankood waxaa lagu sameyn karaa si elektaroonig ah ayadoo loo adeegsanayo modem.Si kastaba ha noqotee, markaad ubaahantahay taageerada dhirta, xitaa nidaamyada taageerada fog ee ugu fog wax bedel ah kuma lahan karo inaad heysato farsamo yaqaan DTS ama injineer goobta ah. Shaqaalaheena ayaa kaa caawin kara inaad mashiinkaaga dib uhesho oo shaqeyso.
Distribution Qaybinta heerkulka iyo kuleylka gelinta
DTS, waa muhiim inaan ka caawinno macaamiisha inay doortaan soo celinta saxda ah ka dibna aan la shaqeyno iyaga si loo hagaajiyo isticmaalka, hawlgalka iyo dayactirka qalabka.Waxaan si dhow ula shaqeyneynaa macaamiishayada nidaamka daaweynta kuleylka gudaha iyo / ama daaweyntooda kuleylka dibedda la taliyayaasha hawsha si loo hubiyo in soo celintayadu u shaqeyso oo loogu shaqeeyo habka ugu nabadgelyada badan, ugu waxtarka badan uguna waxtarka badan.
Haddii alaabadaada loo dhoofinayo Mareykanka, ama haddii qalabkaagu yahay rakibaadda ugu horreysa, ama haddii soo celintaada ay ku socoto dayactir weyn, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso tijaabooyin heer-qaybinta heerkulka iyo kuleylka.
Waxaan haynaa dhamaan qalabkii looga baahnaa tijaabooyinka noocan ah.Waxaan soo iibsanay qalab cabbiraad gaar ah (oo ay kujiraan diiwaan geliyaasha xogta) iyo softiweerka falanqaynta xogta si loogu sameeyo si sax ah baaritaanada xaaladaha ugu fiican sida ku xusan shuruudahaaga iyo inaan ku siino warbixinno qoto dheer oo faahfaahsan.
Tan iyo markii la aasaasay, DTS waxay u adeegtay warshadaha wax soo saarka cuntada, iyada oo adeegyo u fidisa soosaarayaasha cunnooyinka aashitada yar (LACF) iyo cabitaannada si looga caawiyo inay aasaasaan habraacyada iyo habraacyada wax soo saarka cuntada aaminka ah. xalalka kuleylka iyo adeegyada macaamiisha ka shaqeynaya iyo kuwa cusub ee ka shaqeynaya adduunka.
Approval Ansixinta FDA
Geynta faylka FDA
Khibradeena iyo wada shaqeynta aan la leenahay la-hawlgalayaasha caalamiga ah ee ku takhasusay bixinta adeegga FDA waxay noo suurta gelineysaa inaan si buuxda u xakameyno himilada noocan ah. Tan iyo markii la aasaasay, DTS waxay u adeegtay warshadaha wax soo saarka cuntada, iyada oo adeegyo u fidisa soosaarayaasha cunnooyinka aashitada yar (LACF) iyo cabitaannada si looga caawiyo inay aasaasaan habraacyada iyo habraacyada wax soo saarka cuntada aaminka ah. xalalka kuleylka iyo adeegyada macaamiisha ka shaqeynaya soo celinta adduunka iyo kuwa cusub.
Qiimeynta isticmaalka tamarta
Maanta, isticmaalka tamarta ayaa caqabad ku ah heer kasta. Qiimaynta baahida tamarta waa lama huraan maanta. Waxtarka ugu wanaagsan, qiimeynta waa in lagu sameeyaa heerka hore ee mashruuca.
Maxaad ugu baahan tahay qiimeyn xagga tamarta ah?
- Qeexida shuruudaha tamarta,
- Qeex xalalka farsamo ee habboon (hagaajinta booska, dhinacyada farsamada, darajada otomatiga, talobixinta khubarada ...)
Hadafka ugu dambeeya ayaa ah in la wanaajiyo lana yareeyo isticmaalka tamarta ee xarunta oo dhan, gaar ahaan biyaha iyo uumiga, taas oo ah caqabadda ugu weyn ee joogtaynta qarniga 21aad.
DTS waxay uruurisay khibrad xoogan oo ku saabsan yaraynta kharashka tamarta. Xalalkayagu waxay ka caawiyaan macaamiisheenna inay si weyn u yareeyaan isticmaalka biyaha iyo uumiga.
Marka loo eego qiimeynta, baaxadda mashruuca soo celinta, oo ay weheliso xaaladaha shaqo ee dhabta ah ee goobta macaamiisha, waxaan u soo bandhigi karnaa macaamiisha xalal adag ama fudud.
Naga soo wac +86 536-6549353